Tag: ọtụtụ asụsụ | Martech Zone
Tag: ọtụtụ asụsụ
Ecommerce abụwo omume na-ebili n'ime afọ iri gara aga. Na ọrịa a na-efe efe, ọtụtụ mmadụ na-azụ ahịa n'ịntanetị karịa mgbe ọ bụla. Ecommerce na-enye ụzọ zuru oke iji ruo igwe mmadụ n’ụwa niile site na nri n’azụ kọmputa. N'okpuru, anyị ga-eleba anya na mkpa ọrụ ọrụ ntụgharị ahịa ahịa yana otu esi eji ha iji bulie ahịa eCommerce gị. Ihe kpatara ọ ji akwụ ụgwọ iji Nsụgharị Ọkachamara Ọkachamara maka Usoro Azụmaahịa Mba Gị Na Iji Ọrụ nsụgharị ahịa ọkachamara